Lihoxisiwe icala lokushaya ebelibekwe isilomo sePirates uLorch - Impempe
Lihoxisiwe icala lokushaya ebelibekwe isilomo sePirates uLorch
Usengakhululeka agxile ebholeni, asize i-Orlando Pirates iqoqe amaphuzu kwiDStv Premiership umdlali waleli qembu, uThembinkosi Lorch njengoba icala lokushaya abeliqula enkantolo yaseRandburg, eGauteng, lisahoxisiwe.
Uphiko lwezokushushisa kuleli, iNational Prosecuting Authority (NPA) likhiphe isitatimende esibika lezi zindaba ngoLwesibili, lwathi inkantolo yaseRandburg ilihoxisile ngaphansi kwemibandela icala ebeliqulwa nguLorch kule nkantolo.
ULorch waboshwa kodwa waphuma ngebheyili kaR2 000 ngoSepthemba nyakenye kulandela ukuthi intombi yakhe uFundiswa Mathithibala imvulele icala lokushaya.
Izindaba zokuhoxiswa kwecala ziqinisekiswe ngokhulumela iNPA, uPhindi Mjonondwana okunguyena okhiphe isitatimende.
“Abammeli bakaLorch bafake iziphakamiso ehhovisi lomshushisi omkhulu kanti ngemuva kokuzicubungula kahle, umshushisi omkhulu ube esenquma ukukuhoxisa ngemibandela ethile ukushishiswa kukaLorch,” usho kanje uMjonondwana.
Uphinde waveza ukuthi inkantolo iyalele amaphoyisa ukuba aphenyisise leli cala ukuze inqume ukuthi ingaqhubeka yini nokuqulisa uLorch noma iyamdedela.
“ULorch wabekwa icala lokushaya ngenhloso yokulimaza kulandela icala elavulwa yintombi yakhe emaphoyiseni aseMidrand.
“Umshushisi omkhulu uyalele amaphoyisa ukuthi aqhubeke nophenyo lwaleli cala ngoba yena uzocubungula azokuthola bese enquma ukuthi aqhubeke yini nokushushisa uLorch noma alichithe icala,” kuchaza uMjonondwana.
Previous Previous post: Kuyamcika umqeqeshi weBaroka ukukhetha imidlalo kwabadlali bakhe
Next Next post: Ayigwemile iCorona azobhekana kowamanqamu weCurrie Cup